giraanta qalab - Shiinaha Wenzhou Dongyi Makiinado
Tribologically qalabka faa'iido dhismaha Gas-dhagan for low-kelli-miisaanka gaasas siddo qalab xir gaaska qolladdii riixo ee komberesarrada reciprocating ah. Waxay yihiin kartoo, marka la eego design iyo qalabka, in shuruudaha codsiga kala warshado sifeeya saliidda, warshadaha ee dabiiciga ah gaaska, iyo sidoo kale kiimikada iyo kiimikada warshadaha. The siddo si hufan soo saaray ayaa sidoo kale u oggolaan in hawlgalka lagu kalsoonaan karo oo leh nolol dheer in wax soo saarka hawada warshadaha iyo meelo badan oo ...
Qalabka Tribologically faa'iido
dhismaha Gas-dhagan for-kelli-miisaanka yar yahay gaasaska
siddo qalab xir gaaska qolladdii riixo ee komberesarrada reciprocating ah. Waxay yihiin kartoo, marka la eego design iyo qalabka, in shuruudaha codsiga kala warshado sifeeya saliidda, warshadaha ee dabiiciga ah gaaska, iyo sidoo kale kiimikada iyo kiimikada warshadaha. The siddo si hufan soo saaray ayaa sidoo kale u oggolaan in hawlgalka lagu kalsoonaan karo oo leh nolol dheer in wax soo saarka hawada warshadaha iyo meelo badan oo injineernimada geedi socodka.
siddo qalab, siddo fuushanba, iyo guutooyin yihiin macmalay ee naqshado kala duwan:
One-gabal ama segmental toosan
Cadaadis dheeli tiran
siddo naqshado iyo hormariyey isku gaar ah ee codsiyada gaar ah dhibaato iyo dalbanayaan. Tani waxa ay sidoo kale ka mid beddelaad badan oo guulo ka lubricated in operation.Pressure non-lubricated siddo oo isku dheeli tiran ayaa la heli karaa, marka loo arko in codsiyada cadaadiska sare iyo qalab / fuushanba isku giraanta sidoo kale waxaa laga heli karaa codsiyada gaar ah.
siddo qalab dhexroor Large ilaa 47 "(1200mm) waxaa caadadiisu soo saaray for shuruudaha gaarka ah. kala duwan oo ka mid ah qalab iyo kii fuushanaaba siddo oo macdan ah ayaa sidoo kale soo saaray, iyadoo la isticmaalayo fasalada xulay oo naxaas ah ama birta ku tuuray, halkaas oo looga baahan yahay hawl u yeerin.
Previous: qalab iyo ushii
Next: qolof dhalista
14mm Pin qalab
3921919 qalab siddo
6ct Engine qalab Assembly
Cummins Qsb6.7 qalab
Dcec 6ct 260 HP qalab
Deutz Engine qalab Assembly
Diesel qalab Waayo Sale
Engine Qaybo qalab Engine Assembly
Howo qalab Vg1560037011
Isle Engine qalab
Mitsubishi qalab Oo Pin
Qalab Oo Pin
Qalab Oo Golaha Pin
Qalab kombaresarada Madax
Qalab Waayo Wave125
qalab Ring 80mm
Reciprocating qalab kombaresarada Madax
Volvo Engine qalab Td71
Wd615 Engine qalab Vg1560037011
qalab iyo ushii